Inta badan fanaaniinta matalaya dhaqdhaqaaqa maskaxda | Abuurista khadka tooska ah
Inta badan fanaaniinta matalaya dhaqdhaqaaqa maskaxda
Fran Marin | | Fanaaniin, Dhiirrigelinta
Lixdamaadkii ayaa raadkoodii kaga tegey taariikhdeena boqolaal waxyaalood oo mid ka mid ah waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee dhacay xilligan ay ahayd hiifka hippie iyo ka soo horjeedkeeda. Aasaaska aadanaha ayaa ka soo baxay indhaha dadweynaha, isagoo kor u qaadaya xorriyadda iyo qiyamka ugu badan ee la isweydiin karo ee ku jira bulshada caadiga ah iyo kuwa laba jibbaaran sida tii xilligaas jirtay. Farshaxanka maskaxda ayaa iyada la dhashay.
Miyirku wuxuu noqon doonaa ilaaha cusub ee kuwa raacsan ee hadda jira, kuwaas oo raadinaya khibrad ka baxsan dunida (ama laga yaabo inay ka cararaan xaqiiqda aan fiicnayn) si isdabajoog ah loogu soo daro daroogada iyada oo ujeedadu tahay in laga gudbo xuduudaha miyir-qabka iyo in la galo adduun gudaha gudahooda ah. , laga yaabee tan ugu qoto dheer ee ay gaari karaan. Haddayna miyirku ilaah cusub yahay, daroogadu waxay fure u tahay gaadhitaanka ilaahaas, maxaa yeelay waxaa loo qaatay inuu yahay walax awood leh, oo awood u leh inuu u adeegsado adeegsadayaashiisa dhinacyada kale ee adduunka.
Alex Gray wuxuu u taagan yahay xiisaha uu u qabo metaphysics iyo fikirka ruuxiga ah. In kasta oo uu yahay farshaxan akadeemiyadeed (wuxuu wax ku bartay Kulliyadda Farshaxanka iyo Naqshadeynta Columbus), haddana waxaa lagu gartaa dareere, dabacsan iyo halabuur ku dhowaad aan hagaagsaneyn. Ujeedada shaqadiisu waxay ahayd isku dheelitirnaan. Si uun wuxuu rabay inuu helo isku darka saxda ah ee qofkasta oo bini aadam ah waa inuu la kulmaa si loo gaadho feker nadiif ah iyo isafgarad u dhexeeya maskaxda, jidhka iyo ruuxa. Wuxuu kudhowaad ku mashquulsanaa jirdhiska bini'aadamka illaa heer uu ka barto in ka badan toban sano Jaamacadda New York. Waxaad ka heli kartaa boggooda halkan ka
Michael Garfield waa mid ka mid ah wakiilada ugu badan ee muuqaalkan muuqaal ahaan sida uu sheegay shaqadiisa wuxuu damacsan yahay inuu kala furfuro oo uu ka dhigo aaladda tamarta ee muusiggu haysto. Wuxuu kaqeyb qaatay xafladaha farshaxanka aan lasoo koobi karin sida Wakarusa, Global Sound Conference, Sonic Bloom ama Electric Forest dad badana waxay ugu yeeraan Indiana Jones ee farshaxanka tooska ah. Waxaad wax badan ka ogaan kartaa isaga adoo isku xiraya cinwaankan.
Jonathan Solter wuxuu farshaxankiisa ku horumariyaa dhamaan xeebta San Francisco wuxuuna aad ugu fiirsadaa daaweynta uu ku siiyo meelaha iyadoo loo marayo farshaxanka sawirka si uu u siiyo soo jeedintiisa nuqulo waaweyn oo muujinaya. Wuxuu qayb wanaagsan ka sameeyaa curinta riwaayadaha tooska ah ee darbiyada. Ma xiisaynaysaa fanaankan weyn? Gali jihadaas kuna raaxeysta shaqadooda wanaagsan.
Eric Nez wuxuu isku magacaabaa inuu yahay riyaal run ah oo nafta ah, nasiibna u helay inuu helo hadiyadda ah inuu awood u yeesho inuu u gudbiyo himilooyinkiisa adduunka isagoo adeegsanaya farshaxanka muuqaalka. Yoga iyo qaab nololeed kale oo dabiici ah iyo dhirta daawada ah ay ku helaan saameyn weyn, waa cuntada shaqadooda wanaagsan ee ay la wadaagaan sayniska ruuxiga ah ama cilmiga metaphysical iyo cilmu-nafsiga qofka. Isbeddelka miyir-qabka ayaa ah udub dhexaadkiisa iyo u-ekaanta isbeddelka sida wakiilka kobcinta iyo sixirka ee marinaya xigmadda adduunka. Wuxuu tixgeliyaa shaqadiisa sida maaddada iyo midhaha horumarkiisa iyo koritaanka shaqsiyadeed ee shaqsiga. Wax badan ka baro isaga aquí.
Pouyan Khosravi wuxuu ku dhashay Iran sideetameeyadii, markii dambena wuxuu ku noolaa Hindiya, ilaa uu aakhirkii u wareegay Boqortooyada Ingiriiska oo uu haatan degan yahay. Sida naftiisa laga soo xigtay, ka dib markii uu ku noolaa khibrad qarsoodi ah qofkii ugu horreeyay, wuxuu go'aansaday inuu ka bilowdo farshaxanka adduunkan. Dabeecaddiisa ugu weyn ayaa ah inuu horumariyo kuna muujiyo farshaxanka waxyaalaha qarsoon ee maskaxda aadanaha iyo ruuxa dadka. Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato farshaxan yahankan cajiibka ah halkan guji.
Safarkii uu Dennis Konstantin u safray si uu u helo qaabab cusub oo muujinta ah, wuxuu ka helay qaab loo abuuro farshaxan uu isagu isagu ugu magac daray "Quantum Realism", oo astaamaha ugu muhiimsan ka kooban yahay mideynta qaab dhismeedka waxyaabaha muhiimka u ah waxyaalaha oo ay weheliso muuqaalka midabka. Saamaynta Cubism, Pointillism ama Futurism, farshaxanku ma doonayo nuqul ka mid ah wax, laakiin waa inuu muujiyo dabeecadda xaqiiqda jirta. Shaqadiisu waxay ugu horreyn ku saleysan tahay muujinta ugu badan ee isbeddelka, iyo metamorphosis ee saddexda qaab-cabbir. Faahfaahin intaas ka badan boggaaga.
Ted Wallace waa farshaxanyahan dhawaan ka fadhiistay shaqadiisii ​​macallin fanka dugsiga sare. Hadda wuxuu ku nool yahay Kanada xaaskiisa. Aasaaska xirfaddiisa waa inuu ka shaqeeyo khibradaha, taas oo fikradaha iyo dareenka aan lagu qabsan karin ereyo keliya. Ted Wallace wuxuu wax ku baraa rinjiyeynta, sawir qaadista iyo aqoon isweydaarsiga mandala ee Kanada iyo Tulum. Wixii ku soo kordha halkan kala soco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Inta badan fanaaniinta matalaya dhaqdhaqaaqa maskaxda
Xirmada Kheyraadka Xagaaga
Xirmooyinka Infographic: Tilmaamaha Keyboard ee Adobe Suite ee Mac iyo Windows